Izinzuzo zokuphotha impilo okufanele wazi | Bezzia
Izinzuzo zokuphotha impilo
USusana godoy | 01/06/2021 16:00 | Kubuyekezwe ku- 31/05/2021 11:41 | Ukuzivocavoca
Uyazazi izinzuzo zezempilo zokuphotha? Ingenye yalezi zindlela ezikhona ngobuningi bamajimu futhi kubonakala sengathi ukunyathela isigqi somculo nokufaka umfutho othile, kungenye yezindlela ezinhle kakhulu ezikhethwe yiwo wonke umuntu ukunika ukunyakaza emzimbeni.
Kepha kungukuthi ngale kwalesi sizathu, sinokuthile okunye okususelwa kukho izinzuzo ezinkulu zomzimba. Noma yimuphi umdlalo oguqulwe ngokwezidingo zethu uzobe uphelele, kepha kulokhu kuningi esingakusho. Awukazami okwamanje? Kusukela manje unezizathu ezimbalwa zokukwenza.
1 Uzonciphisa ubungozi bokulimala
2 Thuthukisa impilo yenhliziyo yakho
3 Isisiza sishise ama-calories
4 Yisho ukuvaleka kokucindezeleka phakathi kwezinzuzo zezempilo zokuphotha
5 Sizolala kangcono kakhulu
6 Ukuzethemba kwakho kuzoqala ukukhuphuka
Uzonciphisa ubungozi bokulimala
Yize kungukuzivocavoca okukhulu, inqobo nje uma silinganisela lokhu ngamandla, ayikho ingozi enkulu yokulimala njengokugijima. Kepha ngaphandle kokuqhubeka, kuthiwa kuphephe kakhulu kunezinye izinhlobo zemisebenzi eyenziwa nangaphakathi endlini. Sizolawulwa kakhulu ngaso sonke isikhathi futhi umzimba wethu uzosibonga. Konke lokhu kungenxa yokuthi kubhekwa njengomthelela ophansi emzimbeni wethu nasemadolweni noma emalungeni.
Thuthukisa impilo yenhliziyo yakho
Noma nini lapho sikhuluma ngokwenza ezemidlalo, siphikelela ekutheni sinika impilo eningi ezinhliziyweni zethu futhi asinaphutha. Kulokhu, phakathi kwezinzuzo zezempilo zokuphotha kufanele sikusho lokho izonakekela izinhliziyo zethu ngokuba ngumsebenzi 'we-cardio'. Yehlisa umfutho wegazi futhi ishiye ubungozi bezifo ezithile zenhliziyo. Enye inzuzo noma isizathu sokuthi kungani kufanele siqale ukukwenza!
Isisiza sishise ama-calories
Silawula ukuqina kokuzivocavoca thina uqobo ngosizo lwamasondo analo ibhayisikili. Ngakho-ke, lapho singayinika umfutho omkhulu, siyazi ukuthi umzamo uzoba mkhulu. Yize into ejwayelekile ukulandela njalo izinkomba zokuqapha, ungazama futhi ukukuvumelanisa nezidingo zakho. Namanje kuthiwa ekilasini elilodwa singalahlekelwa ngaphezu kwama-calories angu-650. Lokho esivele sikhuluma ngakho yisibalo esibalulekile okufanele usicabangele. Kepha hhayi lokho kuphela kepha uzothola ithoni, nakho okubaluleke kakhulu.
Yisho ukuvaleka kokucindezeleka phakathi kwezinzuzo zezempilo zokuphotha
Ngaphandle kokungabaza, kungenye yezindaba ezimnandi iningi lethu elizamukela ngezandla ezimhlophe. Ngoba lapho sizijwayeza imidlalo futhi uma siyayithanda, sizozizwa singcono kakhulu, sikhululekile, sinqanyuliwe kuzo zonke izinkinga Futhi lokho kusho ukuthi sizosusa ingcindezi ezimpilweni zethu, kanye nasezingxabanweni zomzimba. Izindaba ezimnandi, awucabangi?
Sizolala kangcono kakhulu
Kukho konke kuyaziwa lokho lapho sikhathele kancane, lapho sesikhiphe ukungezwani futhi sizizwa sisesimweni esingcono, iphupho lizovela cishe ngaphandle kokulindela. Ngakho-ke, bekufanele sisho enye yezinzuzo zezempilo zokuphotha. Njengoba kunabantu abaningi abanokuqwasha futhi abangakwazi ukulala ubusuku nobusuku. Ngakho-ke, ngokuzama ikhambi elihle njengaleli, awusoze ulahlekelwe yilutho futhi kuningi esingakuzuza.
Ukuzethemba kwakho kuzoqala ukukhuphuka
Sidinga ukuthi ngaso sonke isikhathi sibe nokuzethemba okuphezulu, ukuze sizizwe singcono. Ngakho-ke, ukuzijwayeza kwalo mdlalo kuholela nasemiphumeleni emihle kukho konke lokhu. Ngoba uzobona izinguquko, uzobona ukuthi isikhathi ngasinye lapho uzokwazi khona ukulandela isigqi kangcono, ulayishe ibhayisikili kancane futhi konke lokhu kuguqulela ekubeni nokukholelwa okukhulu kuwe nokuzizwa ungcono. Ngoba ngezemidlalo asiqinisi kuphela emzimbeni wethu, kepha nasengqondweni, okubaluleke kakhulu ukwedlula eyokuqala. Ingabe usuvele uzijwayeza ukuphotha?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Ukuzivocavoca » Izinzuzo zokuphotha impilo
Okhiye bokulwa ngokuphumelelayo nokuqunjelwa
'I-Sequía' uchungechunge olusha lwe-TVE olunobuso obaziwayo